Cnc muchina centre musangano - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Jera mutsetse nhaka zvemichina CNC zvinhu kugadzira, zviri zvoga kudzora machine Ezvemutauro (akadai drills, hakunakidzi maturusi, lathes) uye 3D vaidhinda achishandisa kombiyuta. Muchina unogadzira chidimbu chemidziyo (simbi, mapurasitiki, huni, zvedongo, kana zvinoumbwa) kusangana nezvinotsanangurwa nekutevera zvakarongedzwa zvakarongedzwa uye pasina munhu anoshanda. Isu tinoita R&D uye tinogadzira zvigadzirwa zvine chekuita nekugadzirwa neiyi tekinoroji.
MuCNC yemuchina wepakati pabasa-shopu tinogadzira chikamu chehardware chedu zvigadzirwa zvenguva dzose, senge zvinotsigisa zvimiso.
Izvo mbishi zvinhu zvataishandisa isimbi senge Aluminium, Mhangura, Brass nezvimwewo izvo mbishi zvinhu zvatinoita zvinouya kuongorora zvichiteera standard ISO 9001: 2015, uye zvatinoda zvemukati.
CNC ndeye hukuru hukuru pane isiri-komputa michina iyo mush inodzorwa nemaoko.
Kubudikidza neiyi tekinoroji, jera fiber inokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvitsva kana kugadzirisa zvigadzirwa zvazvino zvigadzirwa kuti zvive zvinokwikwidza, uye zvinokwanisa kupa vatengi vedu zvinonzwisisika zvinopa uye mhando yepamusoro.
Isu tinovandudza zvigadzirwa zvekugadzira uye tine mutemo wemutengo unoshanda kugadzirisa mhinduro uye automatization.
Chinangwa chedu kugadzira uye kupa zvigadzirwa zvakakwana uye zvakavimbika kune vatengi vedu mukuvaka kweterevhizheni network uye masimba ekuparadzira magetsi. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti tiwedzere kubatana, tarisiro tinogona kuvaka hwakavimbika, hurefu-hukama hukama.